GTMSMART Machinery Co., Ltd.dia orinasa teknolojia avo lenta mampiditra R&D, famokarana, varotra ary serivisy. Ny vokatra fototra dia ahitanaMachine Thermoforming mandeha ho azy SY Kaopy plastika Thermoforming Machine, Plastika Vacuum mamorona milina, milina kaopy taratasy, milina fanaovana lovia taratasy SY milina fanaovana takelaka taratasy sns.
PLC mandeha ho azy PVC plastika banga ...
Thermoplastic Vacuum Forming Machine Description Ny vacuum forming, fantatra ihany koa amin'ny hoe thermoforming, vacuum pressure forming na vacuum molding, dia fomba iray ahafahan'ny ravin-plastika mafana ...
Fampidirana ny vokatra Ity milina Thermoforming Pressure ity indrindra ho an'ny famokarana fitoeran-plastika isan-karazany (sehatra atody, fitoeran-tsakafo, fitoeran-tsakafo, fitoeran-tsakafo, sns) miaraka amin'ny thermopla ...
Toby telo tonta fanerena ratsy...
Toeram-piantsonana tokana Thermof Automatic...
Single Station Automatic Thermoforming milina, mampiasa ampahany voahodina mazava tsara, manohana lasitra vita amin'ny tena, fitaratra polishing, Integrated rafitra miasa, mora azo.
Toby efatra lehibe PP plastika T ...
Toerana efatra lehibe PP Plastic Thermoforming Machine dia mamorona, manapaka ary mametraka amin'ny andalana iray. Izy io dia entin'ny motera servo tanteraka, miasa maharitra, tabataba ambany, fahombiazana avo, mety amin'ny ...
Vacuum miforona mandeha ho azy ...
Fampiharana Ity milina fanaovana vacuum ity dia ampiasaina indrindra amin'ny fanaovana lovia famafazana fambolena, karazan-tsakafo sy fitaovana rehetra.
Fikoriana plastika hydraulika mandeha ho azy...
Tavoahangy Voninkazo plastika mandeha ho azy Mak...